China Professional 150mm 6inch Big Orbit 25mm Dual Action Polisher S25 mpanamboatra sy mpamatsy | Checheng
Item TSY: CHE-S25
Ny S25 dia namboarina manokana ho an'ny antsipiriany mavesatra sy ny asa fanaovana poloney. Ny 25mm no elanelana eccentric lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, mamonjy farafahakeliny 10% ny fotoana fiasana amin'ny sehatra mitovy raha ampitahaina amin'ny mpamafa DA hafa. Izy io dia miasa na aiza na aiza no ilana hery fanitsiana mifandanja miaraka amin'ny famaranana tanteraka. Ny herin'ny môtô mahery 900W amin'ny alàlan'ny loko mandry indrindra. Ho fanampin'izay, nohavaozinay ny anatiny ho an'ny bearings NSK Japoney rehetra ary nohamafisinay ny tariby herinaratra mba haharetan'izy ireo maharitra ny fitsapana ny fotoana. Ny gauze vovoka sy ny lavaka fametahana rivotra no nampiana tao amin'ny vatan'ny milina mba hisorohana ny hafanana miorina. Fanaparitahana miandalana miaraka amin'ny fanaraha-maso hafainganam-pandeha sy ny fiasa malemy dia manomboka azo antoka sy mety kokoa ny miasa. Ny fanaraha-maso hafainganam-pandeha ampiasain'ny ankihibe dia manome fifehezana hafainganam-pandeha miovaova amin'ny 0 ka hatramin'ny 4800 OPM, tsy hampitombo ny tabataba izany raha manome antoka ny fahombiazan'ny asa. Miaraka amin'ny S25 antsika, dia mahomby sy mora kokoa ny miasa poloney mafy indrindra.
1.Ny elanelan'ny eccentric 25mm lehibe indrindra eto an-tany. Raha ampitahaina amin'ny mpandoko orbital hafa dia mamonjy 10% amin'ny faritra mitovy izy io.
4.Izany dia manana takelaka fihenan-tsakafo haingam-pandeha izay manampy amin'ny fisorohana ny hafanana amin'ilay masinina.
5.Ny motera 900watt mahery dia manala ny fahasimbana haingana kokoa.
6. gauze vovoka mba hisorohana ny vovoka amin'ny rafi-piaramanidina, izay miaro ny motera amin'ny fahavoazana.
Previous: 21mm Dual Action Car Orbital Random Polisher S21 avo lenta